Ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra (Jakoba 5 : 16)
Misy fanontaniana izay tsy apetraky ny Baiboly amin’ny lafiny ara-tsaina fa apetrany amin’ny lafiny pratika. Amin’ireny fanontaniana ireny dia tsy izay antony nahatonga ny olana no ambarany fa izay zava-kendren’Andriamanitra amin’ny famelany ny fitrangany. Eo anoloan’ny aretina dia tsy milaza ny antony nahatonga azy ny Baiboly. Ambarany kosa fa any amin’ny Fanjakan’Andriamanitra dia tsy hisy aretina intsony, ary ny aretina izay misy ety an-tany dia tokony ho tsaboina sy sitranina dieny izao. Mampiseho izany ny teny navalin’i Jesoa ny fanontanian’ny mpianany mikasika ny antony nahatonga ny aretin’ilay teraka jamba. “Tsy io lehilahy io no nanota, hoy Izy, na ny ray aman-dreniny, fa ny hanehoana ny asan’Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan’izay naniraka Ahy, raha mbola antoandro.” (Jao 9: 3-4). Dia nositraniny ilay jamba.
Tahaka izany koa ny amin’ny fahafatesana. Tsy ahitana afa-tsy sombitsombim-panazavana ny amin’izany ao amin’ny Baiboly. Izay hita mazava ao kosa dia ny fanitrikitrihana fa ho foana tsy hisy intsony ny fahafatesana ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Manoloana izany dia tokana ihany ny baiko ho antsika kristiana : manaraka an’i Jesoa izay tsy nitsahatra nanao fahagagana tamin’ny fanasitrana aretina sy famoahana fanahy maloto ary fananganana ny maty fony Izy tonga nofo tety an-tany !
Fa mipetraka ho azy ny fanontaniana : Amin’izao andro iainantsika izao, mbola ilaina ve ny fahagagana ? Mbola misy ve ny fahagagana ? Ahoana no hatao hisian’ny fahagagana ? Ny valiny : Ilaina ary tena mbola misy ny fahagagana. Ny vavaka no fanalahidiny !
Ny vavaka dia filatsahan-tena sy fanahy hiroboka tanteraka amin’izay antony ivavahana. Ny vavaka dia mitaky ny fanatrehana sy ny fahalianan’ny mpivavaka, mitaky fihainoana sy fijerena tsara ny mombamomba ilay toe-javatra ivavahana ary mitaky fanoloran-tena sy fanokanana fotoana ary fanomezana izay ananana rehetra, raha ilaina izany. Tamin’ny nanasitranan’i Jesoa ilay zazalahy nampahorian’ny demonia dia nilaza Izy fa misy karazan-javatra tsy vita raha tsy amin’ny fivavahana ihany. Tamin’izany koa no nametrapetrahany fanontaniana tamin’ny ray aman-drenin’ilay marary alohan’ny hanatanterahany ny fanasitranana azy (Mar 9: 14-29).
Ny vavaka dia fitondrana ao anaty, fametrahana ao am-po izay rehetra mikasika ilay toe-javatra ivavahana, mba hahafahana mamadibadika sy mahita tsara izay tena zava-dehibe tokony ho velarina eo anatrehan’ Andriamanitra. Luther dia nilaza fa arakaraka ny habetsahan’ny zavatra ho ataony amin’ny andro iray, no mahabe koa ny fotoana atokany hivavahana amin’ny maraina. Fa ny vavaka marina dia tsy mamela izay manao azy hitomoemoe-poana. Ny vavaka marina dia fanoitra manosika hihetsika sy hiasa. Anjarantsika ny milatsa-tena hanao izay rehetra azontsika atao amin’ny fitolomana amin’Andriamanitra sy ny fanarahana ny baikony, Azy kosa ny manatanteraka ny sitrapony mba hisehoan’ny voninahiny. Izany ihany no lalana hahatongavana amin’ny fahagagana. Amin’izany indrindra koa no anamarinan’ Andriamanitra ny teniny manao hoe : “Ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra” (Jak 5: 16).
Tsy zava-miafina velively ny herin’ny vavaka, satria azon’ny olona rehetra tanterahina. Ny ilaina fotsiny dia ny firotsahana amin’ny fo sy fanahy ao anatin’ny vavaka atao sy ny fanarahana ny fitarihan’ny Tompo izay tsy mitsahatra manao fahagagana amin’izao andro ahavelomantsika izao. “Izay mino Ahy, hoy izy, ny asa ataoko no hataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy. Ary na inona na inona no hangatahinareo amin’ny Anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka” (Jao 14 : 12-13).
“Mifampivavaha, mba ho sitrana ianareo” (Jak 5: 16), hoy ny teny fikasana ampanantenan’ny Soratra Masina fahagagana antsika. Koa na ny fitokanana hivavaka mangina, na ny fotoam-bavaka iarahana amin’ny rahalahy ao amin’ny Tompo, na ny alim-bavaka, na ny rojom-bavaka dia samy tsy tokony ho tsitsina fa amin’izany no anokafan’Andriamanitra ny masontsika hahita fahagagana.